पर्यटन Archives - Page 17 of 20 - Dna Nepal
ताङतिङदेखि याङ्जाकोट नयाँ ट्रेकिङ रूट १२ माघ २०७४, शुक्रबार ०१:३९
पोखरा, माघ १२ । कास्कीको ताङतिङबाट, करापु डाँडा हुँदै याङ्जाकोटसम्म नयाँ पदमार्गको पहिचान गरिएको छ । होमस्टे ट्रेकिङ ट्रेल नाम दिइएको यस पदमार्गले कास्कीका होमस्टेहरूलाई आपसमा जोड्नेछ । ताङतिङ र याङ्जाकोट होमस्टेमा बास बसी पदयात्रा गर्दै..
पोखराको पर्यटन समीक्षा–संख्या बढ्यो, गुणस्तर बढेन ८ माघ २०७४, सोमबार १५:२६
पोखरा, माघ ८ । पोखरामा पर्यटकको संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०१७ मा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । तर यहाँका पर्यटन ब्यवसायी सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले पर्यटकको संख्या बढेपनि गुणस्तरीय पर्यटक..
साठी बर्षदेखि मापदण्डविहिन महानगर ३ माघ २०७४, बुधबार ०४:११
प्रकाश ढकाल पोखरा, माघ ३ । पोखराको भुगोल र मापदण्डको बिषय उठ्यो भने बिज्ञ र ईञ्जिनियर दुईतिर हुन्छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन्, अर्काथरी चाहीँ कमजोर भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाउँछन् । पोखरालाई सुहाउने मापदण्ड हालसम्म बनेको छैन । बर्षेनी..
बनेकै ६ बर्षपछि भ्यू टावर उद्घाटन ३० पुष २०७४, आईतवार १२:५४
पोखरा, पुस ३० । कास्की र स्याङजाको दोसाँधमा रहेको मट्टिखानको भ्यू टावर निर्माणको ६ बर्षपछि उद्घाटन गरिएको छ । टावरको आईतबार नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा तनहूँ क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा (क) का सांसद किरण गुरुङले उद्घाटन गरे । २०६३ सालमा..
सिरुबारीले रुद्रमानलाई सम्झिएको दिन (फोटोफिचर) १७ पुष २०७४, सोमबार १२:०५
प्रकाश ढकाल सिरुबारी, पुस १७ । जतिबेला तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्ध चल्दै थियो । देश पूरै आक्रान्त थियो । राज्य र विद्रोही पक्षको भिडन्तले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल थियो । आँफ्नै घर नमिलेको बेला कुन पाहुना बलेनीबाट पस्छ ?..
बहस ! लेकसाईड नो भेइकल जोन ? १३ पुष २०७४, बिहीबार ११:४२
पोखरा, पुस १३ । पोखराको लेकसाईड क्षेत्रलाई नो भेइकल जोन (सवारी निषेधीत) क्षेत्र बनाउने बिषयमा बहस सुरु भएको छ । यसअघि केही पर्यटन ब्यवसायीहरुले यसलाई सवारी आवागमन रोकेर पर्यटक र सडक यात्रुका लागि मात्रै खोल्ने बिषयमा छलफल चलाएका थिए । त्यही..
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना, एक विदेशी पर्यटक घाइते १२ पुष २०७४, बुधबार ०३:४१
पोखरा, पुस १२ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–६ खहरे क्यामपिङचोकमा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा परी एक विदेशी नागरिक घाइते भएका छन् । मंगलबार पोखराको सराङकोटबाट उडान गरी खहरेमा अवतरण गर्ने क्रममा टर्कीका नागरिक २८ वर्षीय महोमद सरिफ याजगिल्ला सख्त..
पर्यटन महोत्सवमा खेल आकर्षण ११ पुष २०७४, मंगलवार १३:०८
अन्नपूर्ण हिमालमा पर्यटन महोत्सव, यसरी सुरु भो दोश्रो चरण १० पुष २०७४, सोमबार १४:२२
पोखरा, पुस १० । पर्यटनका लागि सबै मौसम भन्ने मुल नाराका साथ अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिद्वरा आयोजित अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन महोत्सव २०७४ को दोस्रो चरण सोमबारदेखि छोम्रोङमा सुरु भएको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र पर्यटन..